tegory_title% Mpanamboatra | Orinasa fanafody sy mpamatsy fanafody herbal China
Hatsarao ny rafitra fiterahana ary hampiroborobo ny fampandrosoana follicular atody famerenana amin'ny laoniny
Tombony azo amin'ny vokatra 1.Ny fampiasana ny teknolojia fisarahana sy ny fitrandrahana ny membrane, ny fanadiovan-tsivana amin'ny molekiola, ny fotony mifantoka. 2. Ny fitrandrahana avo lenta, izany hoe, ranoka 1 ml dia misy rongony 2-3 grama, avo kokoa noho ny fenitry ny indostria. 3. Zavamaniry voajanahary, maitso madio, tsy misy ambiny. Dosis zava-pisotro mifangaro: ity vokatra ity dia azo atondrahana 200-300L isaky ny 250ml, mandritra ny 3-5 andro, afaka manatsara ny lokon'ny atody ary mampitombo ny lanjan'ny atody; mampiasa 5-7 andro hitomboan'ny atody tsy tapaka ...
Granueles aotom-bavoka mandevona Anti-Coccidium ho an'ny vorona rehetra, tsy biotisialy ary tsy residuales
Ny fanafody raokandro sinoa hitsaboana ny coccidium, azo antoka, mandaitra ary tsy miverina intsony! 【Mpiorina lehibe】 Artemisia annua, Bupleurum, Sophora flavescens, Changshan, Imperata faka. 【Fampisehoana vokatra】 1, teknolojia fitrandrahana hafanana ambany fitrandrahana sinoa nentim-paharazana, fanodinana tsy mafana, fanodinana singa mavitrika dia tsy potehina, tsy voanidina, ny atiny akora mavitrika dia avo telo heny noho ny granule mahazatra. 2, Qingre lena mando, heostatika mandeha mangatsiaka, manala ny bibikely famonoana rivotra, detox ...
Tombontsoa azo avy amin'ny sakamalao mampiroborobo ny fivelaran'ny ra sy mifehy ny fisefoana
Ireo akora fototra Botanical Source 6-Gingerol Fizarana Root Famaritana 5% 20% 50% Item Famaritana Famaritana Ginger Extract / GingerExtract Powder / 6-Gingerol Mankasitraka Fahazavana Vovon-tsavony Mofomamy & Faha-toetra mampiavaka ny vongan-javakely habe 100% mandalo fahaverezana 80 mesh ara-batana amin'ny fanamainana ≤5.0 % Density marobe 40-60g / 100ml Ash solifara ≤5,0% GMO Free Status tsy misy taratra Chemical Pb ≤3mg / kg Toy ny ≤1mg / kg Hg ≤0.1mg / kg Cd ≤1mg / kg Total microbacterial council ...
Perilla sy Mint extract®
Salama sy azo antoka amin'ny andro mafana, arovy ny akoho amam-boronao amin'ny Heatstroke! Ireo akora fototra Perilla Seed Extract, Perilla Leaf Extract, Mint, Borneol, VC, sns. Fananana dimy lehibe: Anti-stress-stress, esory ny rivotra ary ratsy rivotra, Anti-oxidation, Antibacterial. Inona no atao hoe adin-tsaina? Ny fihenjanana amin'ny hafanana dia andiana fihetsika tsy ara-dalàna izay mitranga amin'ny akoho ambanin'ny mari-pana ambony noho ny thermoregulation sy ny physiology. Inona no manimba ny fihenjanana hafanana amin'ny akoho amam-borona? Layer: 1. Ny feed inta ...
Qi Zhen mampitombo granule fiarovana
[akora fototra] honeysuckle, faka isatis, forsythia, Arctium, gypsum, Anemarrhena, Ge Gen, Houttuynia, folium, licorice, astragalus root, Ligustrum lucidum sns .. [fananana] ity vokatra ity dia poti-volontany mavo, mamy. [vokatra endri-javatra] 1, Ity vokatra ity dia avy amin'ny Group Research Institute, miantehitra amin'ny Oniversite Jiangxi amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, University of Hebei momba ny fambolena, manam-pahaizana sy profesora maromaro, fandalinana mafy, aorian'ny fanamafisana ny fomba fanao klinika.